I-Street Fighter 6: Idethi yokukhishwa, Izinhlamvu, nakho konke Esikwaziyo - Ukuzijabulisa
I-Street Fighter 6: Idethi yokukhishwa, Izinhlamvu, nakho konke Esikwaziyo
Ithini Idethi Yokukhishwa kwe-Street Fighter 6?
Ingabe Ikhona I-trailer ye-Street Fighter 6?
Yiziphi Izinhlamvu Ze-Street Fighter 6 ezikhona?
Yiziphi Izingxenyekazi Ze-Street Fighter 6?
Ingabe u-Yoshinori Ono Manje usezibandakanye ku-Street Fighter 6?
Ingxabano yelogo ye-Street Fighter 6: Iyini?
Ukuqala kwe-STREET FIGHTER 6 kwenzeka ngesikhathi se-Capcom Pro Tour 2021 Season Final ngoFebhuwari, okusho ukuthi abalandeli bomdlalo wokulwa odumile baphonkile futhi bamagange ukuqala omunye umjikelezo wokushaya kanzima, isenzo esiphula inhlanganisela maduze.
Konke esikwaziyo nge-Street Fighter 6, okuhlanganisa uhlu lwama-trailer ayo, esikulindele ngohlu lwegeyimu, nokuqagela kwethu okuhle kokuthi igeyimu izokhishwa nini, kuhlanganiswa kulesi sihloko.
Alukho usuku oluthile lokukhishwa kwe-Street Fighter 6 kuze kube manje, ngokusho kweCapcom. Sengikushilo lokho, umshicileli uthe abalandeli bazokwazi ukuthola okwengeziwe ngalo mdlalo ngesinye isikhathi kuleli hlobo, uma kungenjalo maduze. Umbukiso ku-Geoff Keighley's Summer Game Fest, E3, noma ukusakazwa kwewebhu okufanayo okwethulwa ngabakwaCapcom ngokwabo, sicabanga ukuthi kuzoba semakhadini.
Kulandela ukugebenga kwe-Capcom ngasekupheleni kuka-2020, umdlalo usuyinani elaziwayo, okubonisa ukuthi iphrojekthi kungenzeka ukuthi isihambile ngalesi sikhathi. Sikholelwa ukuthi idethi yokukhishwa yasekupheleni kuka-2022 noma mhlawumbe ngo-2023 ingenzeka okwamanje.
I-Capcom ishicilele i-Street Fighter V ngoFebhuwari ka-2016, ngakho-ke kungenzeka ukuthi inkampani iqonde isikhathi sokukhishwa esifanayo sokulandelanisa kwegeyimu ngonyaka olandelayo. Phela, umshicileli ubone impumelelo enkulu ngokukhishwa kwangaphambilini kwe-Q1 njenge-Resident Evil 7 kanye ne-Monster Hunter: World, futhi bangakhetha ukulandela indlela efanayo ne-Street Fighter.
Yebo! Isiqeshana setiye semizuzwana engama-30 se-Street Fighter 6 siza njengezibukeli zeCapcom Pro Tour Finale ngoFebhuwari. Ifilimu ayivezi okuningi ngale kwe-Ryu ebanzi yokulungiselela ukulwa nochungechunge olusha, uLuka. Ngaphambilini u-Luke wayephawulwe njengomuntu obalulekile ngekusasa le-franchise ye-Street Fighter, futhi siyasibona leso siphakamiso sisebenza lapha.
U-Ryu no-Luke yibona kuphela abalingisi abaqinisekiswe ngokusemthethweni ukuthi bayingxenye yohlu lwe-Street Fighter 6, ngokusho kukaCapcom.
Ngeshwa, akukaze kube khona ukuputshuka kokuthi ubani omunye ongafakwa emdlalweni, kodwa abalandeli bangalindela cishe izinhlamvu ezingu-25 seziphelele lapho umdlalo ukhululwa ngokugcwele. Ekupheleni kukaFebhuwari, iwebhusayithi ye-FGC EventHubs yenze ucwaningo. Nalu uhlu lwezinhlamvu eziphezulu ezingu-20 abalandeli abangafuna ukuzibona zibuya.
Nokho, kufanele kuqashelwe ukuthi uma ukukhishwa kwe-DLC ye-Street Fighter V kuyinkomba, i-Capcom ayihlali ihlangene nabalandeli ngaso sonke isikhathi uma kukhulunywa ngezinhlamvu ezifakiwe. Noma kunjalo, imiphumela yalolu nhlolovo inikeza ukuqonda kokuthi yini i-franchise aficionados engayifisa.
Kulabo abangahlabeki umxhwele ngohlelo lokuqala, ukuputshuka kwedatha ka-2020 kusho ukuthi iCapcom ihlose ukukhulula abantu ababili be-Street Fighter 6 eminyakeni ezayo, eyodwa ngo-2020 futhi eyodwa ngo-2021.
Uma futhi uma le midlalo ikhululwa, cishe izobizwa ngokuthi i-Super Street Fighter 6 ne-Ultra Street Fighter 6, ngokusho kwe-franchise precedent, kodwa kuzodingeka silinde ukuqinisekiswa okusemthethweni ngaphambi kokuba siqiniseke.
I-Woodo – Umdlalo Oyingqayizivele Wendida ye-3D
Wonder Woman Game - Konke Esikwaziyo Kuze kube manje
Itekisi Lokugcina - Umdlalo Wetekisi Oyingqayizivele We-VR!
Esimemezelweni esisemthethweni se-Street Fighter 6, iCapcom ayizange icacise ukuthi yiziphi izinkundla ezizosekelwa, nokho imifanekiso evela ekuputshuzweni kwedatha kaNovemba 2020 yabonisa ukuthi i-SF6 izotholakala kukho kokubili i-PlayStation 4 ne-Xbox One kulokhu.
Imibiko ithi ngeke kube nenguqulo ye-Xbox yomdlalo kuphela, kodwa isihloko sizodluliselwa kumapulatifomu esizukulwane sokugcina njenge-PlayStation 5 ne-Xbox Series X|S, phakathi kwezinye.
Kuyacatshangwa ukuthi izivumelwano nezimo zezezimali zishintshile kusukela lawo ma-imeyili e-Capcom aqala ukutholwa, kodwa iqiniso lokuthi ukubuka kuqala kwe-Street Fighter 6 bekungenakho ukumakwa kwe-PlayStation phezulu esikrinini kungase kuvezwe.
Cha. Ngokushesha ngemva kwesimemezelo sokuqala somdlalo, i-IGN yamemezela ngokungalungile ukuthi u-Ono uzodala isitolimende esilandelayo. Njengoba kunikezwe ukuthi u-Ono washiya i-Capcom ngo-Ephreli wonyaka odlule, kwanqunywa ukuthi iphutha laliwumphumela wokungabhalwanga kahle. Kusukela manje, kubukeka sengathi u-Yusuke Hashimoto, umklami wegeyimu, kanye no-Kazuhiro Tsuchiya, umdidiyeli, yibona abazobe bephethe iphrojekthi.
I-Street Fighter 6 cishe izoba nomuzwa ohlukile kunabanduleli bayo bangaphambili ngaphansi kobuholi obusha, kodwa u-Ono kungenzeka futhi ukuthi ube nesandla emcabangweni wokuqala womdlalo ngisho noma engeke ahileleke ngokuqondile ngomphumela oqediwe. I-Street Fighter 6 ihlelelwe ukukhululwa ngo-2015.
Emuva kokumenyezelwa kwalo mdlalo abalandeli bazwakalise ukungenami ngophawu, abaningi bethi lufana nophawu lweselula enebhokisi lezaziso ekhoneni.
Lapho u-Aurich Lawson we-Ars Technica ehlola ilogo yesihloko esisha, wathola ukuthi yayifana ngokuphawulekayo naleyo eyayitholakala kusizindalwazi sezithombe zesitoko se-Adobe kodwa kusukela ngaleso sikhathi yehliswa umnyango wezomthetho wenkampani. Ngaphambilini, isithombe besingathengwa ngo-$80 ngegalari yomsebenzisi we-xcoolee.
ICapcom ithole okuwukuphela kwamalungelo okusebenzisa uhlobo lwe-Adobe, ngokusho kuka-xcoolee, okhulume ne-IGN ngesinqumo sabo sokususa uphawu esitolo se-Adobe. Abamele abakwaCapcom abakayiphenduli imibuzo mayelana nokufana phakathi kwalezi zithombe ezimbili okwamanje.
I-MX vs ATV Legends Menyezelwe Ngezinkundla Eziningi!